Mashandurirwo Anoitwa Bhaibheri kubva muchiHebheru nechiGiriki | NWT
Mashandurirwo Anoitwa Bhaibheri
Bhaibheri rakatanga kunyorwa mumitauro yaitaurwa kare yechiHebheru, chiAramaiki, uye chiGiriki. Iye zvino rava kuwanika mumitauro inopfuura 3 000, ringave rakazara kana kuti mamwe mabhuku aro. Ruzhinji rwevanhu vanoverenga Bhaibheri harunzwisisi mitauro yarakatanga kunyorwa nayo, saka vanotoverenga rakaita zvekuiswa mumutauro wavanonzwa. Inzira dzipi dzinofanira kutevedzerwa nevaya vanoisa Bhaibheri mune mimwe mitauro, uye nzira idzodzo dzakashandiswa sei pakubudisa Shanduro yeNyika Itsva?
Vamwe vanhu vanofunga kuti Bhaibheri rinofanira kushandurwa shoko rimwe nerimwe richienderana neshoko rimwe nerimwe remutauro wariri kushandurirwa, kuti munhu anyatsonzwisisa zvaitaurwa mumitauro yarakatanga kunyorwa nayo. Asi hapasi pese pazvinobuda saizvozvo. Ngatimboongororai zvimwe zvikonzero zvacho:
Hakuna mitauro miviri yakanyatsofanana pamanzwi ainoshandisa, uye maumbirwo emashoko nemitsara. Mumwe purofesa wemutauro wechiHebheru anonzi, S. R. Driver, akanyora kuti mitauro “inosiyana pamaumbirwo emashoko nematangiro aakaita, uye . . . mabatanidzirwo anoitwa pfungwa kuti dzibudise mutsara.” Kusiyana kwemitauro kunoitawo kuti vanhu vafunge zvakasiyana. Purofesa Driver vanoenderera mberi vachiti, “Saka manyorerwo anoitwa mitsara anosiyana-siyana zvichienderana nemutauro wacho.”
Hapana mutauro uripo mazuva ano une manzwi kana kuti mashoko anonyatsoenderana nechiHebheru, chiAramaiki, uye chiGiriki zvakashandiswa kunyora Bhaibheri. Saka kushandura pachiitwa zvekuti shoko rimwe nerimwe rinowanirwa rinoenderana naro kunogona kuita kuti zvisanzwisisika kana kuti kunogona kureva zvakasiyana nezvairehwa.
Zvinorehwa nemashoko zvinogona kusiyana-siyana zvichienderana nepaashandiswa.
Mudzimwe ndima, mushanduri anogona kushandura achiita shoko neshoko, asi anofanira kuzviita achinyatsongwarira.
Ngatimboonai mimwe mienzaniso inoratidza kusanzwisiswa kunogona kuitika kana pakashandurwa shoko neshoko:
Magwaro anoshandisa shoko rekuti ‘kurara’ achireva kurara kwekubatwa nehope uye kurara murufu. (Mateu 28:13; Mabasa 7:60) Shoko iri parinoshandiswa richireva rufu, vashanduri veBhaibheri vanogona kushandisa mashoko akadai sekuti ‘kurara murufu,’ kuti munhu ari kuverenga asavhiringidzike.​—1 VaKorinde 7:39; 1 VaTesaronika 4:13; 2 Petro 3:4.
Muapostora Pauro akashandisa mashoko anowanika pana VaEfeso 4:14 anogona kushandurwa shoko neshoko kuti “kutamba vanhu madhaisi.” Iri dimikira rekare rinobva patsika yekunyengedza vanhu yaiitwa pachishandiswa madhaisi. Mumitauro yakawanda, kana mashoko aya akashandurwa sezvaari haana zvaanoreva. Kana mashoko aya akashandurwa achinzi “kunyengera kwevanhu,” anonzwisisika zviri nyore.
Pana VaRoma 12:11 pakashandiswa mashoko echiGiriki ekuti kana akangoshandurwa sezvaari, anenge achiti “kufashaira nemweya.” MuchiShona, mashoko aya haabuditsi zvinenge zvichirehwa zvacho, saka muBhaibheri rino akashandurwa achinzi “pisai nemweya.”
Zvichishandurwa shoko neshoko muchiShona: “varombo pamweya”
Pfungwa yacho: “vaya vanoziva kuti vanoda kutungamirirwa naMwari”
Mumharidzo yake yepaGomo, Jesu akashandisa mashoko anowanzoshandurwa achinzi “Vakaropafadzwa varombo mumweya.” (Mateu 5:3, The Bible in Union SHONA Version, rine zviperengo zvanhasi) Asi mumitauro yakawanda, kana mashoko aya akashandurwa shoko neshoko zvinenge zvichirehwa zvacho hazvinzwisisike. Dzimwe nguva, kana mashoko ekuti “varombo mumweya” akashandurwa sezvaari anogona kureva munhu ane pfungwa dzisina kunyatsokwana kana kuti angareva munhu asingaiti zvinhu zvinoratidza upenyu kana kuti chido. Asi pano Jesu akanga achidzidzisa vanhu kuti mufaro wavo unobva pakuziva kuti vanoda kutungamirirwa naMwari kwete pakugutsa zvinodiwa nemiviri yavo. (Ruka 6:20) Saka kana pakashandurwa pachinzi “vaya vanoziva kuti vanoda kutungamirirwa naMwari” kana kuti “vaya vanoziva kuti vanoda Mwari muupenyu hwavo” zvinobudisa zvakajeka pfungwa yacho iri kudiwa.​—Mateu 5:3; The New Testament in Modern English.
Makawanda marinoshandiswa, shoko rechiHebheru rakashandurwa kuti “godo” rinenge richireva zvakafanana nezvinorehwa nerechiShona, iro rinoreva kunzwira shanje munhu waunoda kana kuti kunzwira vamwe shanje nemhaka yezvavainazvo. (Zvirevo 6:34; Isaya 11:13) Asi shoko iroro rechiHebheru rinogona kushandiswawo pachitaurwa zvinhu zvakanaka. Rinogona kushandiswa richireva “kushingaira” kunoitwa naJehovha, kana kuti rudo rwakasimba rwaainarwo nevashumiri vake runoita kuti avadzivirire kana kuti ade kuti ‘vazvipire kwaari zvakazara.’ (Eksodho 34:14; 2 Madzimambo 19:31; Ezekieri 5:13; Zekariya 8:2) Rinogona kushandiswa pachirehwa “kushingairira” Mwari kunoitwa nevashumiri vake vakatendeka uye kushingaira kwavanoita pakunamata kana kuti kusada “kuona vanhu vasina kutendeka” kuna Mwari.​—Pisarema 69:9; 119:139; Numeri 25:11.
Shoko rechiHebheru rekuti yadh rinowanzoshandurwa richinzi “ruoko,” asi zvichienderana nepanenge pachishandiswa shoko racho, rinogona kushandurwa kuti “kutonga,” ‘kupa,’ “simba” kana zvimwewo zvakawanda
Shoko rechiHebheru rinowanzotaura nezveruoko, rine zvakawanda zvarinoreva. Zvichienderana nepanenge pachishandiswa shoko racho, rinogona kushandurwa kuti “kutonga,” ‘kupa’ kana kuti “simba.” (2 Samueri 8:3; 1 Madzimambo 10:13; Zvirevo 18:21) Shoko iri rakashandurwa zvakasiyana-siyana muBhaibheri rechiShona reShanduro yeNyika Itsva.
Tichifunga nezvepfungwa idzi, kushandura Bhaibheri haisi nyaya yekungoshandura shoko remumutauro warakatanga kunyorwa nawo uchishandisa shoko rimwe chete pese parinowanika. Mushanduri anofanira kunyatsoongorora, osarudza mashoko emumutauro wake anonyatsobudisa pfungwa inenge ichirehwa nemutauro warakatanga kunyorwa nawo. Uyewo, zvinokosha kunyora mitsara zvinoenderana nemitemo yemutauro uri kushandurirwa wacho kuti zvive nyore kuverenga.
Asiwo hazvidi kuzonyanya kuwedzeredza kana kubvisa zvimwe zvinhu. Mushanduri uya anongoshandura achinyora manzwisisiro ake aari kuita Bhaibheri anogona kunyora nepasipo pfungwa iri kutaurwa. Zvingaitika sei? Anogona kunyora zvaanenge achifunga iye kuti ndizvo zviri kurehwa kana kuti anogona kusiya dzimwe pfungwa dzinokosha dziri mumutauro warakatanga kunyorwa nawo. Bhaibheri rakashandurwa saizvozvo ringava zvaro nyore kuverenga, asi mashandurirwo arakaitwa nerusununguko rwakanyanya anogona kuita kuti muverengi asanzwa zvaitaurwa zvacho pakutanga.
Zviri nyore kuti mushanduri aise dzidziso dzechitendero chake pakushandura kwake. Semuenzaniso, Mateu 7:13 inoti: ‘Mugwagwa wakapamhama, unoenda mukuparadzwa.’ Zvichida nemhaka yedzidziso dzechitendero chavo, vamwe vashanduri vakashandisa mashoko ekuti “kumoto usingadzimi,” pane kushandura chaizvo zvinorehwa neshoko racho rechiGiriki kuti, “kuparadzwa.”
Mushanduri weBhaibheri anofanirawo kuziva kuti Bhaibheri rakanyorwa mumutauro waitaurwa mazuva ese, waishandiswa nevanhuwo zvavo, vakadai sevarimi, vafudzi, uye vabati vehove. (Nehemiya 8:8, 12; Mabasa 4:13) Saka kuti zvinzi Bhaibheri rakashandurwa zvakanaka, mashoko acho anofanira kunzwisiswa zviri nyore nevanhu, pasinei nekuti vakaita sei. Mashoko akajeka, anoshandiswa nevanhu vese uye anokurumidza kunzwisiswa ndiwo anofanira kushandiswa pane aya asingawanzotaurwa nevanhuwo zvavo.
Vashanduri veBhaibheri vakawanda vakangobvisa pasina chikonzero chinonzwisisika zita raMwari rekuti Jehovha, mushanduro dzavo dzemazuva ano kunyange zvazvo zita iroro richiwanika muzvinyorwa zveBhaibheri zvekare. (Ona Mashoko Ekuwedzera A4.) MaBhaibheri akawanda anotsiva zita iroro nerekuremekedza rakadai sekuti “Ishe,” uye vamwe vanotovanza pfungwa yekuti Mwari ane zita. Semuenzaniso, mune mamwe maBhaibheri, munyengetero waJesu wakanyorwa pana Johani 17:26 wakashandurwa uchinzi: “Ndakakuzivisai kwavari,” uye pana Johani 17:6 pakanzi, “Ndakakuratidzai kuna avo vamakandipa panyika.” Asi kana mashoko emunyengetero waJesu akashandurwa zvakarurama anofanira kuti: “Ndakavazivisa zita renyu,” uye kuti “Ndakaita kuti vanhu vamakandipa panyika vazive zita renyu.”
Sezvakataurwa mumashoko ekutanga eBhaibheri reChirungu rakatanga kushandurwa reShanduro yeNyika Itsva: “Hatishanduri Magwaro tichiita setiri kunyora patsva. Tinoedza kushandura shoko neshoko pese pazvinenge zvichiita, kana Chirungu chiri kutaurwa mazuva ano chichienderana nezviri kurehwa uye kana kushandura shoko neshoko kusingavanzi pfungwa yacho.” Saka Komiti Inoshandura Bhaibheri reNyika Itsva yakaedza kushandisa mashoko anoenderana nemutauro warakatanga kunyorwa nawo, ukuwo vasingazonyori mashoko anotovhiringidza kana kuti anoita kuti pfungwa yacho isabuda. Izvi zvinoita kuti Bhaibheri rive nyore kuverenga uye muverengi anogona kuva nechivimbo chakazara chekuti mashoko akafemerwa asvika kwaari akarurama.​—1 VaTesaronika 2:13.
Shanduro yakavimbika inofanira:
Kutsvenesa zita raMwari, ichiriisa panzvimbo paro parakakodzera muMagwaro.—Mateu 6:9.
Kusvitsa kuvanhu mashoko akafemerwa naMwari asina kuchinja zvaanoreva.—2 Timoti 3:16.
Kushandura shoko neshoko kana mashoko uye manyorerwo emitsara emutauro wacho zvichibudisa pfungwa iri kutaurwa nemutauro warakatanga kunyorwa nawo.
Kubudisa zviri kurehwa neshoko kana kuti nemashoko, ndokunge kushandura shoko rimwe nerimwe sezvariri kuchiita kuti zviri kurehwa zvisajeka kana kuti zvisanzwisisika.
Kushandisa mashoko ari nyore kunzwisisa, anoita kuti munhu ade kuverenga.—Nehemiya 8:8, 12.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mashandurirwo Anoitwa Bhaibheri
nwt pp. 1974-1977